2019 Ny vidin'ny tapakila haingam-pandeha ambony indrindra YHT Fandaharam-potoana & Times | RayHaber
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 062019 Ny vidin'ny tapakila haingam-pandeha ambony indrindra YHT Fandaharana sy fandaharam-potoana
08 / 11 / 2019 Ankara 06, 11 Bilecik, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia, Intercity Railway Systems, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
Sarin'ny 2019 amin'izao fotoana izao
Ny vidin'ny tapakila hafainganam-pandeha ambony indrindra 2019 amin'izao fotoana izao sy ny vanim-potoana YHT: Ny lalamby haingam-pandeha izay manamora ny fiainantsika amin'ny fifamoivoizana an-tariby dia manohy mampifandray ireo tanàna sy mpandeha ary kolontsaina samihafa. Ireo lamasinina haingam-pandeha mandeha amina tanàna samihafa manana toetran-dàlana samihafa sy karazana sarety dia omena tamim-pitiavana lehibe ary manana endri-teknolojia avo lenta. Fitaterana TCDD (YHT) amin'ity sehatra ity dia ny fanavaozana rehetra sy fampandrosoana ara-teknolojika amin'ny fomba haingana indrindra hampidirana ilay rafitra dia manome vahana an-dàlana ho tsy azo antoka.
Ny lalamby haingam-pandeha, izay ahafahanao tonga ao an-tanàna amin'ny fotoana fohy kokoa noho ny fiara ary mandeha amin'ny lafiny ara-toekarena, dia mizara ho sokajy telo: pulman, fandraharahana ary fisakafoanana. Rafitra an-tserasera TCDD fitaterana tapakila aorian'ny fisafidianana ny kararanao dia azonao atao ny misafidy izay fiara tianao haleha. Koa satria tsy misy fiara mpandeha ho an'ny fiara momba ny sakafo, tsy misy tapakila amidy amin'ity fiara ity. Afaka misakafo ao amin'ity fizarana ity ianao ary mividy sakafo avy amin'ny sotron.
Lamasinina avo lenta - YHT
Ny lamasinina haingam-pandeha dia nalaina tao Bursa, Antalya, Karaman nataon'ny TCDD Transportation ho an'ny fiara fitaterana mora mankany amin'ny zotra YHT avy amin'ny tanàna sasany. Ny fifandraisana akaiky ny serivisy akaiky indrindra dia misy ny manao fifanarahana amin'ity fomba ity sy hahatongavana amin'ny fiaran-dalamby an-tànana amin'ireo tanàna ireo. Ireo rohy ireo:
Ny fifandraisana Bus Bus High Speed ​​Train Bus
Fifandraisana amin'ny fiaran-dalamby haingana any Antalya Konya
Bursa Eskişehir Fifandraisana amin'ny hafainganam-pandeha ambony
Ireo fiarandalamby haingana dia afaka mandray soa avy amin'ny fihenam-bidy samihafa. Ireo fihenam-bidy ireo dia miovaova eo amin'ny 20% sy 50%.
Ny olona izay mividy tapakilam-bokan-dàlana amin'ny dian-tongotra sy ny toerana fiverenany dia afaka mahazo fihenam-bidy 20 amin'ny tapakila fampiasa amin'ny fiaran-dalamby.
Ny olona eo anelanelan'ny taona 13 sy 26 dia mahazo ny fihenam-bidy 20% satria izy ireo dia ambany noho ny fihenam-bidy.
Ireo mpampianatra avy ao amin'ny ministeran'ny fampianarana dia mahazo fihenam-bidy amin'ny 20 na manao sekoly tsy miankina na sekolim-panjakana izy ireo. Ireo fihenam-bidy ireto dia misy ny principaly sy mpanolo-tsaina mpanampy, oniversite sy oniversite ao amin'ny oniversite ary mpampianatra an'ny teratany tiorka izay miasa any amin'ny firenena vahiny.
Ny fihenam-bidy 20% koa dia ampiharina amin'ny manampahefana miaramila sy manam-pahaizana avy amin'ny OTOM miasa ao amin'ny tafika mitam-piadiana Tiorka.
Ny vondron'olona 12 na ny olona iray dia mividy tapakila amin'ny 12 dia omena ny fihenam-bidy 20.
Ny mpandeha teo anelanelan'ny taona 60 sy ny taona 65 dia manan-jo hanavotana ny 20.
Ny mpandeha nandritra ny taona 65 dia manan-jo amin'ny fihenam-bidy 50.
Ireo mpikambana ao an-toerana na avy any ivelany dia manana zo ihany koa amin'ny karama 20% amin'ny karatra nomen'ny Tale Jeneralin'ny fampahalalam-baovao.
Ny mpiasa TCDD sy ny fianakaviany (vady aman-janaka) dia iharan'ny fihenam-bidy 20.
Ireo zaza latsaky ny taona 7-12 dia mahazo ny fihenam-bidy 50% e Ny zaza latsaky ny taona 7 dia tsy mandoa raha tsy mandeha amin'ny seza mandeha mivahiny.
Nivangainay teo ambanin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha sy novolavolaina mba hahatongavan'ireo olom-pirenena ho any amin'ireo tanàna handehanany haingana sy ny sasany amin'ireo fiaran-dalamby ireo. Raha manana fanontaniana ianao, afaka miantso TCDD Transportation na afaka manomboka mankafy ity dia milamina sy tombontsoa amin'ny alàlan'ny fividianana ny tapakilananao eo amin'ny vidiny ara-toekarena indrindra ao amin'ny pejy fividianana tapakila an-tserasera.
Fiaran-dalamby haingam-pandeha (YHT) fitsangatsanganana
16 nanomboka tamin'ny Jolay 2019;
Isan'andro manomboka eo Bilecik ka hatrany Istanbul, 08.09-11.49-14.44-19.09,
Isan'andro manomboka eo Bilecik ka Konya, 09.59- 15.18- 21.14,
Isan'andro manomboka eo Bilecik ka Ankara 09.11-11.39-15.54-17.56-19.42-20.18
hihetsika amin'ny endrika.
Fiaran-dalamby ao Ankara Istanbul, Ankara 6 ekspedition Miasa. Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha Ankara-Istanbul nijanona tao Ankara dia nijanona tany Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit ary Gebze mijanona tsirairay. 4 ora 15 minitra izay tsy tonga. Ankara-Istanbul Ny fiaran-dalamby tsy mijanona amin'ny fijanonana sasantsasany amin'ny fijanonan'ny fiaran-dalamby sasany mety hitranga fahasamihafana.
MANDEHA HITENY HIARAKA NY ANKARA ISTANBUL YHT
Fiaran-dalamby ao Istanbul Ankara, Istanbul-Ankara ary Ankara-Istanbul 6 ekspedition Miasa. Ny fiaran-dalamby niainga avy tao Istanbul Pendik mankany Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir, Polatli ary Sincan tsirairay avy ao Ankara 4 ora 15 minitra izay tsy tonga. Koa satria tsy mijanona amin'ny fijanonana ny fiaran-dalamby Istanbul-Ankara, mety misy ny tsy fitoviana amin'ny fotoana hahatongavan'ny lamasinina.
Istanbul Ankara YHT Manolotra tolotra manokana
ANKARA ISTANBUL CLICK FOR MORE INFORMATION ABOUT YHT
Sekoly ambony Ankara Eskişehir
Ny fiaran-dalamby amin'ny fiaran-dalamby ao Ankara Eskişehir dia iray amin'ny fijanonana eo amin'ny tsipika Istanbul Ankara. Azo atao tsara ny manatanteraka ny lahasa 5 amin'ny alàlan'ity tsipika ity. Ankoatr'izay, misy koa ny tsipika Ankara Eskişehir. 6 ekspeditionAnkara Eskişehir High Speed ​​Train line dia iray amin'ny 11 isan'andro. Koa satria vetivety io fotoana io dia tsy misy entana anaty sakafo. Koa satria ao amin'ny tanàna ny garan-dalamby, afaka mandeha eo anelanelan'ny Ankara sy Eskişehir. Ora 1,5 fandrosoana. Raha tokony mandeha amin'ny lamasinina dia azonao atao ihany koa ny misafidy tsipika Anlara Istanbul. Ny roa dia mandalo fijanonana mitovy.
MANDEHA HISAO TOO ANAO ANKARA ESKİŞEHİR YHT
Eskişehir Ankara High Speed ​​Train dia iray amin'ny fijanonana eo amin'ny tsipika Eskişehir İstanbul Ankara. Azo atao tsara ny manatanteraka ny lahasa 5 amin'ny alàlan'ity tsipika ity. Ankoatr'izay, misy koa ny tsipika Eskişehir Ankara. 6 ekspeditionEskişehir Ankara High Speed ​​Train line dia iray amin'ny 11 isan'andro. Koa satria vetivety io fotoana io dia tsy misy entana anaty sakafo. Koa satria ao amin'ny tanàna ny garan-dalamby, amin'izao fotoana izao dia manome be dia be ny mpandeha. Salanisan'ny dia Ora 1,5 Mitohy izany.
Ankara Eskisehir YHT Manolotra Tolotra manokana
ESKİŞEHİR ANKARA MIKASIKA MOMBA NY FANDINIHANA AO AMIN'NY YHT
Fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony Ankara Konya 7 ekspedition Miasa. Ny faharetan'ireo sidina ireo dia 1 ora 55 minitra Mitohy izany. Mijanona i Sincan sy Polatli. Misy safidy roa amin'ny tapakila roa, mahazatra sy mahay mandanjalanja izy ireo. Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony taotaly misy 2 dia ahitana kilasy ara-toekarena pulley 2 + 2 ary kilasy mpandraharaha piraika 2 + 2. Fohy kokoa ity indray mitoraka ity, tsy misy sarety mitondra sakafo.
Tsindrio eto raha hahalala bebe kokoa momba ny ANKARA KONYA YHT
Fiaran-dalamby in Konya-Ankara 7 ekspedition Miasa. Ny faharetan'ireo sidina ireo dia 1 ora 55 minitra Mitohy izany. Nijanona i Polatlı sy Sincan. Misy safidy roa amin'ny tapakila roa, mahazatra sy mahay mandanjalanja izy ireo. Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony taotaly misy 2 dia ahitana kilasy ara-toekarena pulley 2 + 2 ary kilasy mpandraharaha piraika 2 + 2. Fohy kokoa ity indray mitoraka ity, tsy misy sarety mitondra sakafo.
Ankara Konya YHT Manolotra Tolotra manokana
MANDEHA HITENY HIKAROKA MOMBA NY ANKARA MOMBA NY KONYA ANKARA YHT
Fiaran-dalamby hainganana Konya- Istanbul 2 ekspedition Izany mahatsapa. Ny fijanonana farany amin'ny lamasinina dia Istanbul Pendik. Fotoam-potoana 4 ora 20 minitra Mitohy izany. Ny fijanonan'ny lamasinina Konya-Istanbul dia ny Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Arifiye, Izmit ary Gebze. Azonao atao ny mividy sidina misy safidy tapakila roa sy mahay mandanjalanja ary safidy 3 samy hafa karazana sarety. Ny fiaran-dalamby dia ahitana ny toekarena polman, orinasa polman, sariety mpandraharahana miaraka amin'ny sakafo.
MANDEHA HITENY HIKAROKA MOMBA NY FANDAHARAM-BAHOAKA MOMBA NY KONYA ISTANBUL YHT
Fiaran-dalamby ao Istanbul Konya isan'andro 2 ekspedition Izany mahatsapa. Konya farany ny fiaran-dalamby dia Konya. Ny faharetan'ny dia fiaran-dalamby 4 ora 20 minitramifameno ihany koa. Fiaran-dalamby haingana any Istanbul-Konya mandalo ny onjam-by Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir tsirairay avy. Azonao atao ny mividy sidina misy safidy tapakila roa sy mahay mandanjalanja ary safidy 3 samy hafa karazana sarety. Ny fiaran-dalamby dia ahitana ny toekarena polman, orinasa polman, sariety mpandraharahana miaraka amin'ny sakafo. Ny vidin'ny tapakilan'ny lamasinina dia miovaova amin'ny karazana sarety.
Istanbul Konya YHT Manolotra Tolotra manokana
ISTANBUL KONYA YHT HIDITRA ANY AMIN'NY FANDINIHANA AO AMINY
Raha manana fanontaniana ianao dia afaka miantso TCDD Transportation (444 8 233) na pejy amin'ny fividianana tapakila an-tserasera, afaka manomboka mankafy ity dia milamina sy tombontsoa amin'ny alàlan'ny fividianana ny tapakila avy hatrany amin'ny vidiny ara-toekarena indrindra.
Valiny YHT ho an'ny fandefasana amin'ny daty 16.07.2019 CLICK HERE
16 Avy amin'ny Jolay 2019 ho an'ny fiaran-dalamby sy fiara fitaterana YHT marina CLICK HERE
Mba hahazoana tapakila amin'ny High Speed ​​Train online CLICK HERE
Torkia TCDD Speed ​​Rail Map
Ankara Istanbul Ny tapakila tapakila haingana amin'ny lamasinina
Istanbul Ankara Fiaran-dalamby tapakila haingam-pandeha ambony indrindra Prices fer
Ny vidin'ny tapakila fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony Ankara Eskişehir…
Ny vidin'ny tapakila fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony Eskisehir Ankara…
Vidiny tapakila fiaran-dalamby avo be ao Konya Ankara…
Konya Istanbul Ny tapakila tapakila haingana amin'ny lamasinina
Istanbul Konya Ny tapakila tapakila haingam-pandeha avo lenta
Ankara Konya Fiaran-dalamby tapakila haingam-pandeha ambony indrindra
Ankara Istanbul Fiaramanidina haingana dia mitaky vola? TCDD ...
YHT Ticket Prices & YHT Ticket Reservations
YHT Ticket Prices & Fandaharana
Pamukkale Express Timetable Sarintany & Vidiny tapakila
ny mpandeha an-tongotra sy tsy mandray tombony amin'ny varotra var.özelleme :: ny talen'ny sekoly sy ny mpanampy ... academicians.muhtarlar.sporcular ... mpikambana ao amin'ny gazety..meclis filoha ... minisitry ny lehiben'ny mpiasa sy mpiara-mitory .. mpikambana ao amin'ny praiminisitra YDKurul .. mpikambana mpikambana ao amin'ny TBMM. sns ..... manam-pahaizana momba ny rantsa-manga ... ary ny mpikambana ao amin'ny gazety .. izy ireo dia mahantra? tsy manana fidiram-bola kamboty ??? .. torpillimi?. tsy tokony hofoanana amin'ny fihenam-bidy. Ireo olona tsy manana traikefa izay tsy mandray soa amin'ny fidiram-bola sy ny fahasembanana dia tsy mandray soa amin'ny mpanankarena sy ny torpedoes. Ireo tombony lehibe tsy voasoratra eto dia mandray soa avy amin'ny fihenam-bidy ihany koa. ... ..havaozana ny zo hampiasaina. fanitsiana
Levent Ozen Hoy izy:
YHT - Vaovao momba ny fiaran-dalamby haingam-pandeha RAYHABERAfaka manaraka!